စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၂)
စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၂)
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Mar 30, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 21 comments
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ကိုအောင်တိုက်သည် ခြင်္သေ့အရွက်ကလေး (၂)ရွက်ဖြင့် တံခါးအားဖွင့်စေပြီး
စာကြည့်တိုက်ထဲသို့ဝင်ကာ အတော်အတန်ကြာအောင် စာအုပ်များ လှန်လှောရှာဖွေလေသည်….
မိနစ် (၃၀)ခန့်ကြာသောအခါ… စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပိုက်လျှက်
အောင်တိုက် ။ ။ ကိုသူရရေ…ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ရှင်းလို့တော့မရတော့ဘူးဗျ… ကိုယ့်ထက်တတ်သိနားလည်တဲ့လူဆီကိုတော့ ပြေး
ကျွန်တော်လဲ ကိုအောင်တိုက်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဝေသာလီဆောင်ဘက်ကို ကျူကျူကားလေးအပြင်းမောင်းထွက်ခဲ့ပါတော့သည်…
ထိုသုို့ သွားရောက်နေစဉ် စဉ်းစားမိသည်က ကိုအောင်တိုက်မှာ လက်ရုံးရည်တင်မက နှလုံးရည်ပြည့်ဝပြီး စည်းကပ်ကိုးကွယ်သင့်သူကို ကိုးကွယ်တတ်သော
အကျင့်ကောင်းရှိသည့် ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းကို လက်မခံ၍ မရနိုင်လောက်အောင် လေးစားအံ့သြမိပါသည်….
သို့သော်ငြားလဲ ထိုသို့အရည်အချင်းပြည့်ဝသောယောင်္ကျားကောင်း ဘေးနားတွင် ကြင်သူဇနီးမယားရှိမနေခြင်းကား အံ့သြစရာဖြစ်ပေသည်…
(ထိုအကြောင်း အပြည့်အစုံကို စုံထောက်အောင်တိုက်နှင့် အုပ်ထိန်းသူမမကြီး ၀တ္တုတွင် ဖော်ပြပါမည်….စာရေးသူ)
ကိုအောင်တိုက်မှာ အသက်(၅၀)၀န်းကျင်ခန့်ရှိသော တရုတ်သွေးနှောသည့် ဥပတိရုပ်ရှိသည့် လူကြီးတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါသည်…
အောင်တိုက် ။ ။ ကိုသူရရေ…ဒါကတော့ ပရောဖက်ဆာဒေါက်တာပါလေရာပဲဗျ… သမိုင်းကြောင်းကို အရမ်းကျွမ်းကျင်သလို..
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတော်ဆုံးဆရာကြီးပဲ…နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်
ဒေါက်တာ ။ ။ ကိုအောင်တိုက်ကလဲဗျာ…ကျွန်တော့လို ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးမိတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကို အထင်မကြီးစမ်းပါနဲ့ဗျာ
အောင်တိုက် ။ ။ လာရင်းကိစ္စကတော့ဗျာ ဓားကိစ္စပဲဗျ….ကျွန်တော် အမှုကိစ္စ တစ်ခုလိုက်ရင်းနဲ့ ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့
ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ ဟင်းလေးအိုးကြီးကို အကူအညီလာတောင်းရတာပေါ့ဗျ…
ဒေါက်တာ ။ ။ ကဲ..ပြစမ်းပါဦး….
ဒေါက်တာပါလေရာကြီးမှာ ကိုအောင်တိုက်ကမ်းပေးသော ဓားမြှောင်ငယ်ကို သေချာကြည့်ရှုပြီးနောက်…စားပွဲထဲမှ အလားတူဓားမြှောင်ငယ်တစ်ချောင်းကို
ဒေါက်တာ ။ ။ ဒီကိစ္စကတော့ ပေါ့သေးသေးကိစ္စ မဟုတ်ပေဘူးဗျ….
ဒီဓားမြှောင်ငယ်က အာဖရိက ဂွတ်ဟုတ်အငူ (Good Hope) ဘက်က သူကောင်းမျိုးနွယ်တွေသုံးခဲ့တဲ့ ဓားမြှောင်ငယ်ပဲဗျ…
အဓိပ္ဗါယ်ကတော့ ဓားမြှောင်ငယ်ရရှိတဲ့လူက ဂိုဏ်းတစ်ခုရဲ့ ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့လူ…
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အသတ်ခံရမယ်လူပေါ့…ဂိုဏ်းအချင်းချင်း စပိုင်တွေ အပေးအယူလုပ်ရင်လဲ သုံးတယ်ပေါ့ဗျာ…
ဓားမြှောင်အရိုးမှာရေးထာတာက စွဟိလိ (Swahili) ဘာသာစကားနဲ့ ကက်ဟီ (Kadhi) ဆိုတာက တရားမျှတာခြင်းလို့
ကျွန်တော့ဆီကို ဒီဓားလေးရောက်နေတာ အနှစ် (၃၀)ကျော်ခဲ့ပြီဗျ…
ကျွန်တော် သမိုင်းကျောင်းသားစာကြမ်းပိုးဘ၀တုန်းက ကျွန်တော်နဲ့အရမ်းခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာ…
သူလဲ ခင်ဗျားလို နာမည်ကြီး စုံထောက်ပဲလေဗျာ…ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ အဲဒီအမှုက မပေါ်ခဲ့ဘူး….
သူပြောခဲ့ဖူးတာကတော့ အဲဒီဂိုဏ်းက အရမ်းလျှို့ဝှက်ပြီး ဂိုဏ်းသားတွေကလဲ အရည်အချင်းပြည့်ဝလွန်းလို့ ဘယ်လိုမှ
အောင်တိုက် ။ ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာပါလေရာ… ကျွန်တော့အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေပါပဲ…
အောင်တိုက် ။ ။ ကိုသူရရေ… ကမ်းနားလမ်းက စာတိုက်ကြီးနားကိုမောင်းဗျာ….
အဲဒီနားက သင်္ဘောကုမ္ဗဏီကို သွားမယ်ဗျို့…ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ သဲလွန်စကို အဲဒီမှာရနိုင်တယ်….
ဒါနဲ့ အဲဒီက ကုမ္ဗဏီပိုင်ရှင် အပျိုကြီး Rose ကတော့ ကျလောက်တဲ့ရုပ်ရည်နော…
ကျွန်တော်နှင့် ကိုအောင်တိုက်တို့ Rose Maritime Co.,Ltd သို့ရောက်သောအခါ…
ကိုအောင်တိုက်သည် ပိုင်ရှင် မမRose ကိုယ်တိုင် ခရီးဦးကြိုပြုပြီးနောက် ရုံးခန်းအတွင်းသို့ခေါ်ယူကာ လိုအပ်သည့်အကူအညီများကိုပေးပါသည်…
အောင်တိုက် ။ ။ Rose ရေ…ကျွန်တော့ကို တစ်ခုလောက်အကူအညီပေးပါဗျာ… ဒီရက်ပိုင်းမှာ အာဖရိကဖက်က
Rose ။ ။ ကိုအောင်တိုက်ရေ…အာဖရိကဘက်ပြန်လာတဲ့လူဆိုတာ တော်တော်ရှားရှားပါးပါးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်…
၁၈၆၉ခုနှစ် စုးအက်တူးမြောင်းဖွင့်ပြီးကတည်းက အမေရိကားဘက်ကို သွားတဲ့သင်္ဘောအားလုံးလိုလို ခရီးတိုတဲ့
စူးအက်ကနေပဲဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ အာဖရိကဖက်ကို တကူးတကမသွားရင်မရောက်ဖြစ်တော့
Rose မှာ ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး (၆)လအတွင်း အာဖရိကဖက်မှ ပြန်လာသောသင်္ဘောသားများ
စာရင်းများရသောအခါ…ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်များကိုပါ…Print ထုတ်ပြီး ကိုအောင်သိုက်အားအပ်နှံခဲ့ပါသည်…
ရရှိသောစာရင်းများ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်များကို ယူ၍ ကိုအောင်တိုက်၏ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Khine & Sisters (K&S) Airline ပိုင်ရှင် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အားသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးနောက် (၆)လအတွင်း အာဖရိကနိုင်ငံများဘက်မှလာသူများ၏ ၀င်ထွက်မှုစာရင်းကုို အဆက်အသွယ်ကောင်းများဖြင့်ရရှိခဲ့ပြန်သည်…
ကျွန်တော်နှင့် ကိုအောင်တိုက်တို့ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများရရှိသည်နှင့် နောက်တစ်နေ့နံနက်စောစောဆူးဝင်နီခြံကြီးသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာခဲ့ပါသည်….
ဆူးဝင်နီခြံကြီးသို့ရောက်သောအခါ…မင်းသမီးဆူးမှာ ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထားသော နှင်းဆီပင်များအား ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ရေလောင်းခြင်းများပြုလုပ်လျက်
ရှိသည်ကို မြင်ရသောအခါ မနေ့က အပူများငြိမ်းအောင်ပြုလေသလားဟုပင် စိတ်ထဲထင်မြင်မိပေ၏…
ဆူး ။ ။ ကိုအောင်တိုက်…စောတယ်နော်…
အောင်တိုက်။ ။ ကျွန်တော်က အမှုတစ်ခု မပြီးမပြတ်မချင်း ကောင်းကောင်းအိပ်မရတာကတော့ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီဗျာ…
ကျွန်တော်တစ်ခုသိချင်တာက အခုကျွန်တော်ပြတဲ့လူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားပြောတဲ့အမတ်မင်းဆိုတဲ့လူပါလား…မပါလားပဲ…
မင်းသမီးဆူးကို ကိုအောင်တိုက်မှ ဓားမြှောင်ငယ်အကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောက်ချက်များကို ပြောကြားရင်း…Rose နှင့် ခိုင်ခိုင်တို့ထံမှရရှိသော
စာရွက်စာတမ်းများကို ပြသလျှက်ရှိရာ…ကျွန်တော်မှာ ကျယ်ဝန်းလှသော ဆူးရဲ့ ခြံဝန်းအတွင်းလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရင်း အီဂျစ်အကများဖြင့်နာမည်ကြီးသလောက်
အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုများကို နှစ်သက်သည့် မင်းသမီးဆူး၏ ခြံဝန်းအတွင်းမှ အီဂျစ်ဆန်ဆန်ပြုပြင်အလှဆင်ထားမှုများကို ကြည့်ရှုနေမိပါသည်…
အောင်တိုက်။ ။ ကိုသူရရေ….အဖြေကတော့ထွက်ပြီဗျ…
အမတ်မင်းဆိုတဲ့လူ နာမည်အရင်းက ဦးမင်းမတ်တဲ့…မွန်လူမျိုး..
AMM ဆိုတဲ့ Export, Import Company မှာ ရှယ်ယာ ၄၀% ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး…
မြန်မာနိုင်ငံကို သင်္ဘောအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ စိန်တွေကိုတင်သွင်းနေတဲ့
ခိုင်ခိုင်ပေးလုိုက်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ တောင်အာဖရိကကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို (၄)ကြိမ် လေယာဉ်ပျံနဲ့
Rose ပေးလုိုက်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ တောင်အာဖရိကကနေပြီးတော့ပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို (၃)ကြိမ်
သင်္ဘောသားအဖြစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ သိရတယ်…
သူရ ။ ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကနေစပြီး စုံစမ်းကြမလဲဗျ…
အောင်တိုက် ။ ။ အမတ်မင်းဆိုမှတော့ဗျာ….AMM ကစမှာပေါ့ဗျ….
မျှော်နေတယ် နော့ .. အားပေးပါဒယ်။
အော် လက်စသတ်တော့ နာလေယာဉ်ကုမ္ပဏီကနေ သွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေတဲ့ မင်းမတ်ဆိုတာ လူဇိုး သူခိုး ဂျပိုးကို နာကတော့ နာ့ကိုလာငမ်းနေတယ်ထင်ပြီး လေယာဉ်ခတွေ ဈေးလျှော့ပေးလိုက်ရတာ မွန်လူမျိုး ဆိုပဲလား မိဂီမနဲ့အမျိုးတော်တယ် ကိုမတ်ကဂျပန်ဘက်ကိုလည်း တစ်ခါသွားဖူးတယ် ကိုဖက်ရေ .. သတင်းထပ်ပေးတာနော်. ……….
စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ တော်တော် ကောင်းလာပြီ။
နောက်အပိုင်းတွေ သွေးမအေးရလေအောင် ဆက်တိုက် မြန်မြန်လေး တင်ပေးပါ။
ပြီးရင် ပေါင်းချုပ်ထုပ်ပေးပါ။ စုဖတ်ချင်လို့။ အတွဲတွေသိပ်မဝေးနဲ့နော်။ ဆက်တိုက်တင်။
ထပ်မျှော်နေတယ် နောက်နေ့ပေါ့ တစ်နေ့ထဲနှစ်ခါမတင်ရဆိုတော့လဲအင်း………… နောက်တစ်ခါတင်များ
များတင်ပါဗျ ကိုရီးယားကားစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ရက်မှ နှစ်မျက်နှာတဲ့ လူဇိုးကြီး………
ဇာတ်ရှိန်ကတော့ မြင့်လာပြီ ..
မွန်လူမျိုး မင်းမတ်ကတော့ ဒါမျိုးတွေ လုပ်နေကြထင်ပါတယ်
ရုပ်ကြည့်တော့ မထင်ရဘူးတကယ် …………
စနေ၊ တနင်္ဂနွေကျတော့ ဖတ်တဲ့လူတွေနဲတာရယ်…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ အင်တာနက်နဲ့ဝေးနေတာရယ်တွေကြောင့် တင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ ဒီနေ့ (၂)ပိုစ့်တင်ပေးလိုက်တာပါ…
ကြာရက် (Week Day) တွေမှာတော့ တစ်နေ့ကို တစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ မြန်မြန်တင်ပေးပါ့မယ်…
ကိုရီးယားကား ညည MRTV-4 မှာ ၁၅မိနစ်စာ စောင့်စောင့် ကြည့်ရသလို ဖြစ်နေတော့မယ် ထင်တယ်။
အင်း မြ၀တီက ကိုရီးယားကားလို ကြော်ငြာအရှည်ကြီးဝင်လို့ကတော့ နာဖို့သာပြင်။
ငါ့နှယ့်နော် ဒီ သပွတ်အူ အရုပ်ထုပ် အမှုကိုမှ လက်ခံမိရက်သားဖြစ်သွားတယ်….
ဒီပို.စ် အဆုံးသတ်ရင် ၀တ္ထု အရင်ထုတ်မယ် ပြီးရင် ဗီဒီယိုရိုက်မယ်…. စာနယ်ဇင်းပွဲကိုတော့ တတောင်းချားကြီးများ ဟော်တယ်မှာ..
တောင်းလို.ရတဲ့ ထမင်းကျန်ဟင်းကျန် ဘူဖေး နဲ. ကြွရောက်လာတဲ့ လူချီးမင်းများနဲ. စာနယ်ဇင်း ငဖွများအား… တည်ခင်းဧည့်ခံကာ…
အငြိမ့်မင်းသမီး မဆူးမှ ဆက်ဆီဒန်.ဖြင့်၎င်း၊ သင်္ဘောကုန်ပါပြီပိုင်ရှင် မမအုံမှ သင်္ဘောသီးအစိ တစ်ယောက်တစိကျ၎င်း၊ လေယာဉ် ကုန်ပါပြီ ပိုင်ရှင် အခိုင်မှ ပုဇင်း တစ်ကောင်ဖင်ကြားညှပ်ကာ လေယာဉ်မယ်အဖြစ် လေယာဉ်(ပုဇင်း)စီးပြကာ ဖျော်ဖြေပါမည်…… အကြောင်း… အသိပေးအပ်ပါသည်……..
ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်အိုင်ပီ မဲတူမကတော့ အမှူမပြီးမချင်း ပြေးနေရလို. မလာနိုင်ပါကြောင်း…
စာရေးသူ ဖက်ကပ်ကတော့ စာအုပ်ရောင်းရငွေအား ယောက္ခမ အကြွေးဆပ်ရန် ကြိုးစားရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း…
ဒါမျိုးလဲ ဖြစ်သကိုး ကြောင်ဝလေးရယ်။
ဟေ့ ဇာတ်လမ်းဆုံးလို့ မှ နာ့နံမယ် မပါရင်တော့ နင်တော့ အတေဘဲမှတ်။ ;-)
အရေးအသားကိုက သေသွားတဲ့ မင်းသိင်္ခကြီး
လူပြန်ဖြစ်ပြီး ရေးထားသလားတောင် ထင်ရပါတယ်။
အမှတ် ၁ မှာကတည်းက ဖတ်နေတာ
အမှတ် ၂ မှာ ကြိုက်သွားပြီ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နားမယ်ဆိုတာကတော့ သိတ်မရားဘူးထင်တာပဲ။
ဆန်းဒေးစကူး ထဲမှာ အမတ်မင်း ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ လို့ တွေးနေရတော့မယ် ကိုဖက်ကတ်ရေ ။
အရီးလတ်က နာ့နာမည်မပါရင် တေပြီမှတ် ဆိုတော့
ဦးကြာကလည်း အားကျမခံ နာ့နာမည်မပါရင် ကားနဲ့တိုက်ပစ်မယ်။:D
အခုမှ ရွာထဲဝင်ဖြစ်တော့ အပိုင်း(၂)တောင်ရောက်နေပြီ။
ဇတ်ရည်လည်အောင် (၁)ကို ဖတ်ရဦးမယ်..
The Cape of Good Hope (Afrikaans: die Kaap van Goeie Hoop, Dutch: About this sound Kaap de Goede Hoop (help·info), Portuguese: Cabo da Boa Esperança) isarocky headland on the Atlantic coast of the Cape Peninsula, South Africa.
Kadhi or karhi ( Hindi: कढ़ी, Rajasthani: कड्डी/खाटो, Punjabi: ਕੜ੍ਹੀ, Gujarati: કાઢી, Urdu: کڑھی, Marathi: कढी) is an North Indian and Pakistani dish
ဒီက တကယ့် တောင်အာဖရိကက မဲမဲအကောင်ကြီးကိုသွားမေးပြီးထည့်ထားတာ…ဟီး
ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် company ပိုင်ရှင်မှန်းတောင်မသိဘူး။ ခက်တာကအော်ငါ့မလဲ သင်္ဘောသားတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ company ဖြစ်လင့်ကစား အပျိုကြီးဖြစ်ရလေတယ်။ အာဟင့်အာဟင့်။ သင်္ဘောသား အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးနဲ့ အမျိုးတော်သလားမှတ်တယ်။ ဖုန်းလှည့်လိုက်တာ ဒက်ကနဲဆို သင်္ဘောသီး စာရင်း ကျလာတယ်။ အာဟိ အပြင်မှာသာဆို မလွယ်ကြော။ အိုင်တီခေတ်မှတ်လား။ ပေးလိုက်တဲ့စာရင်းတွေက အင်တာနတ်က ကနတ်ကြီးမန်းပေးလိုက်တာ လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့။ မြန်လိုက်တဲ့ကွန် ဂျပန်က အသံရထားထက်မြန်လွန်းလို့လေ။ ဟီဟိ။ ဖုန်းချပြီးပြီးချင်းပဲမေးဝင်လာ……….တာ။ အောင်တိုက်တွက်စာရင်တွေကလေ။
ဖတ်ပြီး ဘာမှမပြောဘဲ ပြန်ထွက်သွားပါသီ…
နောက်အပိုင်းများကိုလဲ မသိမသာ လာဖတ်ပါမြည်
ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ..စုံထောက်ကြီး က မင်းသားကိုး ..ဟိဟိ